Isniin, Sept 7 , 2020-Bangiga Amaana oo heshiis la saxiixday shirkad lubnaanis ah – LaacibOnline
Isniin, Sept 7 , 2020-Bangiga Amaana oo heshiis la saxiixday shirkad lubnaanis ah
Isniin, September 7, 2020 (HOL) – Amaana Bank oo uu fadhigiisa yahay magaalada Muqdisho ayaa heshiis la saxiixday shirkad laga leeyahay dalka Lubnaan oo ka shaqaysa howlaha horumarinta softaweerada ee ay ku shaqeeyaan qaar ka mid ah bangiyada caalamka.
Xaflad lagu qabtay magaalada Dubai ayuu Bangiga Amaana ku la saxiixday heshiiskan shirkadda la yiraahdo path Solutions oo fadhigeeda yahay magaalada Beyruut.
Qandaraaska ay kala saxiixdeen labada dhinac ayaa ah mid lagu kobcinaayo adeegyada Bangiga uu u qabto ummada Soomaaliyeed.
Adeegyada ay shirkadda ka caawin doonto Bangiga ayaa waxaa mid ah adeegga qaybta howlaha 24ka saac ee macaamiisha ku xiran Bangiga. Warsaxaafadeed ay si wadajir ah u oo saareen labada dhinac ayaa lagu yiri
Shirkaddan waxay Bangiga ka taageeraysaa in uu siiyo bulshada Soomaaliyeed adeeg tayo leh oo qiimo jaban. Adeegyadan ay bixinayso shirkadda ayaa sidoo kale waxaa ay macaamiisha bangiga siinayaan damaanad qaad buuca iyo amni hantiyadeed.
Labada dhinac heshiisyada waxaa u kala saxiixay Cabdirisaaq Xuseen Macalin oo ah guddoomiyaha Amaana iyo Madaxa Path Solutions Maxamed Katiib.
Axmed Maxamed Aadan , Hiiraan Online
← Chelsea close to making goalkeeper their eighth summer signing after Petr Cech recommendation
From Thiago Silva to Emerson Palmieri – Chelsea’s strongest defence ahead of Brighton →
Talaado, Sept 15, 2020-Wasiirka warfaafinta Somaliland oo laga helay Covid19